I-Oasis Yomlando - Inhliziyo YaseDublin - I-Airbnb
I-Oasis Yomlando - Inhliziyo YaseDublin
453 okushiwo abanye
Ikamelo e-i-townhouse ibungazwe ngu-Ben
U-Ben Ungumbungazi ovelele
Itholakala kwenye yezindawo ezingomlando nezimaphakathi zaseDublin, eyakhiwa ngo-1830 eyakhiwe eduze kweGrand Canal, le ndawo yangasese yangasese iwuhambo lwemizuzu embalwa ukusuka kuzo zonke izingosi zaseDublin ezidume kakhulu ezihlanganisa i-Trinity College, iSt. Stephen's Green kanye neThempeli Bar.
Uzoba nakho konke okudingayo ukuze ube nokuhlala okukhumbulekayo nokuhlukile, nezitolo zekhofi zasendaweni nezindawo zokudlela ezitholakala ngaphesheya komgwaqo.
Izivakashi zizojabulela indawo yangasese kule ndlu enekamelo labo langasese, igumbi lokugezela kanye nekhishi. Ngena embhedeni onethezekile futhi uthokomele ngenkathi ubukele i-Netflix esikrinini esingu-45", noma uhlale futhi uphumule esihlalweni futhi uphuze ingilazi yewayini. Ideski lihlala eduze kwefasitela elikhulu, libheke ngaphandle engadini, lihle kakhulu. ngokufunda incwadi enhle noma ukwenza umsebenzi othile nge-WiFi esheshayo.
I-HDTV engu-45" ene- I-Netflix, I-Amazon Prime Video
4.50 out of 5 stars from 453 reviews
4.50 · 453 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-453
Sihlala e-Georgian Dublin yomlando. Indlu ngokwayo yakhiwa ngeminyaka yawo-1800 futhi isagcina izici eziningi zokuqala, ngokusonteka kwesimanjemanje.
Indawo iyathandeka ngempela ngaphandle nje kwenkaba yedolobha. Ngaphesheya komgwaqo kukhona i-deli, i-Starbucks, isitolo esitholakala kalula, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokushicilela zendabuko zase-Ireland! Kukhona namapaki endawo kanye nomsele onokuhamba kahle emgwaqweni wethu.
Sishiya izivakashi zethu zizenzele ezabo izinto, njengoba zinengxenye yazo yendlu. Kodwa-ke siyatholakala uma kukhona imibuzo.
Igumbi ngokwalo alizwakali kakhulu endlini yonke ukuze izihambeli zingaphazanyiswa yinoma yikuphi ukuphuma nokuhamba nokunye okuphambene nalokho.
Igumbi ngokwalo alizwakali kakhulu endlini…
UBen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Dublin namaphethelo